Uma ufuna gcwalisa izikhala ebusika into esihlwabusayo hhayi kuphela, kodwa ewusizo kakhulu, cranberry noshukela - ncamashi okudingayo. A omuncu kancane esitolo hhayi kuphela kakhulu ukupheka izithelo iziphuzo noma jelly ebusika, kodwa kuyoba yinto izindlela ezinhle kakhulu ukunakekela - amajikijolo ane eziningi vitamin C kanye ukulandelela izakhi ezidingwa umzimba. Indlela ukupheka wokulungiselela okumnandi, funda i-athikili yethu.
1 kg amajikijolo fresh, uzodinga 1 kg ushukela. Geza cranberry, ecacile zonke amatshe kanye namahlamvu, bese cwilisa amaminithi ambalwa ngamanzi abilayo. Songa okuqukethwe epanini e colander noma susa ngesipuni slotted. Manje, amajikijolo ngempela esithambile kungaba pyurirovat ngokusebenzisa ngesihlungo, twist e grinder inyama noma nquma in a blender - ngendlela othanda ngayo. Ungqimba berry ushukela, uhlanganise kahle kuze nokonakala ephelele yesihlabathi ngokushesha walala phezu amabhange. Ngemva badinga inzalo, epholile, roll ihlanganisa futhi uthumele endaweni emnyama ukulinda abandayo ebusika.
Elimnandi esitolo: cranberry ushukela kanye nezinongo
1 kg cranberry fresh zivuthiwe;
waba ngaphansana kunabanjengonkulunkulu ilitha lamanzi ethafeni;
kwengxenye isipuni isinamoni.
Cranberries, geza reassemble, indawo emanzini abilayo bese upheka kuze kuze kube yilapho yonke amajikijolo musa liqhume. Songa mass colander bese ake kuyayiqeda. Ngemva shukela, usinamoni, ugovuze emlilweni ophansi, imenze ngamathumba ukukhanya. Cool ezigcwala amabhange.
Cranberries noshukela orange
Uzodinga ujamu enongiwe:
a kilogram of amawolintshi kanye cranberry;
Berry geza reassemble, amawolintshi uthathe wedges, asuse imbewu - asikho isidingo ukususa uqweqwe. Ngemva Beka izithako blender uphehle kahle, futhi izithelo kanye amawolintshi ungakwazi crank ngokusebenzisa grinder inyama. Ukulandela mass okuholela ushukela uhlanganise kahle. cranberry ecubuziwe nge orange ngomumo - ngilibeke phezu amabhange, isivalo eduze futhi uyigcine kuze ebusika.
izakhiwo ewusizo cranberry
Ngo Folk imithi, lokhu berry esetshenziswa kusukela ezikhathini zasendulo, it is udumo tonic, antipyretic, isilonda sisheshe siphole, kanye nezinye izakhiwo. Kuyasiza nge sebethule nosawoti, izinkinga esiswini, kuncishiswe ukopha zangaphakathi. Iphinde isetshenziselwe for rheumatism, isifo sikashukela, isifo sofuba nezinye izifo. Sami amajikijolo fresh (inothi, ukulungiswa ngokuvumelana ngenhla zokupheka cranberry asidingi ngokweqile ukwelashwa ukushisa amajikijolo, ngakho ukugcina zonke izakhiwo kunenzuzo) aqukethe eningi Vitamin A, C, E, acetic acid, malic acid, kanye amafutha namaminerali. Ngakho-ke, ebusika njengoba nje prophylaxis Kunconywa ukuba baphuze cranberry juice noma ijusi - it is a isipuni nganoma yiziphi izimpahla chaza ingilazi yamanzi, engeza uju oluncane aphuze ubumnandi. Kodwa-ke kuyoba okumnandi uma udle sokuvuna cranberry kanye nje kancane itiye noshukela c.
Uketshezi Magnetic - amanzi ageleza phezulu